Torohevitra azo ampiharina amin'ny fampianarana ny zanakao ny fomba tsara | Alika Manerantany
Torohevitra azo ampiharina amin'ny fampianarana ny zanakao fomba tsara
Fernanda | | Fitaovana alika, Training, Puppies
Anisan'ireo manidy ny alikany ve ianao rehefa tonga ny mpitsidika? Ity toe-javatra ity dia manolotra sary tena mahazatra ao an-trano maro, na dia amin'ny alika sariaka aza ... Fa raha ny tompony no nampianatra azy ireo fomba sasany, fony izy ireo alika, azo antoka fa afaka miara-miaina miaraka amin'ny fitsidihana rehetra izany.
Na dia ny ankamaroan'ny fotoana aza dia tsara ny mandeha any a behaviorist manam-pahaizana, be dia be ny "tompo" manana ny toe-tsaina sy ny fotoana hampianarana fahalalam-pomba amin'ireo sakaizany mahatoky. Ny kilalao fanabeazana ho an'ny ambaratonga samihafa dia amidy amina biby fiompy maro, izay fialamboly ary koa fianarana. Azonao jerena amin'ny tranokala manokana, toy ny ShopAlike, andiana vokatra tena mahaliana ho an'ny dingan'ny fiofanana.
Mieritreritra ny hanome kilasinao ny alikanao? Raha izany, ireo torohevitra ireo dia mety aminao tokoa. Voalohany indrindra, tokony hoheverinao fa ny alika kely dia kely dia kely ny faharetana, noho izany dia tokony hampianarinao ny biby fiompinao mandritra ny minitra vitsy monja isaky ny lesona. Rehefa eo anelanelan'ny efa-taona sy enim-bolana ny alikanao dia afaka manomboka lesona fankatoavana ara-dalàna kokoa izy.
Ao anatin'io fomba io dia tsy maintsy tadidinao fa ny vokatra "kolikoly" dia vokatra mahagaga. Tsy maintsy omenao valisoa hatrany ireo fihetsika tadiavin'ny alikanao, na amin'ny fihinana, sakafo o juguetes. Tsy maintsy maharitra koa ianao.
Eto ambany eto izahay dia hanao lisitra ireo baiko fototra
Any ivelany / Aza mitsambikina: Io no teny lehibe tokony hilazana ny zanak'alika hitsoaka mihemotra. Tokony hamafisina tsara ilay fomba fiteny, toy ny "aza mitsambikina!" Amin'ny fankatoavana, aza adino ny manome azy kibble rehefa mipetraka izy na mijanona tsy mihetsika.
Mitenena: Amin'ity fanazaran-tena ity dia tokony asehonao sandwich aminy ary lazao hoe "miteny!" Mety tsy maintsy "mivovo" ianao mba hahazoany ilay hevitra.
Mangina: manomboka manan-danja tokoa ity baiko ity raha vantany vao manomboka mifoka ny alika.
Dame: Ity baiko ity dia zava-dehibe ho an'ny alika kely mba hianatra hamoy ny kilalao sy ny sakafony. Tsara raha manomboka amin'ny fanomezana kilalao ho an'ny sakafo ho takalony.
Grab / Drop: Ho an'ity hetsika ity dia asaina mandeha mitsangatsangana ianao, manipy sandwich eo alohany, ary miteny hoe "raiso!" Rehefa azon'ny alika kely ny hetsika dia miroso amin'ny "avelao!" ary alatsaho ny sandwich. Rehefa mandeha any amin'ny tsakitsaky izy dia tokony hikasika tsara ny orona ianao eo am-panafahana hoe "miala!"
Efa manana toro-hevitra mahasoa ianao hanombohana amin'ny fampiharana ny fiofanana an'ny zanak'alikao. Inona no andrasanao manomboka?
Sary avy amin'ny:jcolman
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Torohevitra azo ampiharina amin'ny fampianarana ny zanakao fomba tsara
Leilani valdez dia hoy izy:
Nanampy ahy io fa tiako ny hanazavana azy bebe kokoa, misaotra indrindra? X2
Valiny ho an'i Leilani Valdez
Graciela Neyra Uribe. dia hoy izy:
Eny ary ny torohevitro dia ampiharin'ny zanako vavy toy ny milalao amin'ny torohevitrao, misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Graciela Neyra uribe.
ana solis dia hoy izy:
Salama, mafana ny alikako, fa efa 2 andro lasa izy vao mandoa maraina, normal ve izany?
Mamaly an'i ana solis
Fa maninona ny alika no mihinana nefa tsy mitsako?